Follow လုပ်ကိုလုပ်ထားသင့်တဲ့ အာရှမိတ်ကပ်ဘလော့ဂါ (၅) ဦး - For her Myanmar
အားလုံးကတော့ သူ့ဟာနဲ့သူ ဆရာကြီးတွေပဲ
မီယန်မာဘလော့ဂါတွေအကြောင်း ဟိုးတစ်လောတုန်းက ဖောက်သည်ချပြီးပြီဆိုတော့ အခုနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီး အာရှဘက်ကို နည်းနည်းလေး ထပ်လှမ်းကြမယ်လေနော်။ အာရှဘက်မှာ ဘယ်လိုမိတ်ကပ်ပုံစံတွေလိမ်းပြီး ဘယ်လို Tutorial တွေလုပ်လဲ၊ ဘယ်လိုမိတ်ကပ်ရေစီးကြောင်းတွေကို ထပ်လိုက်နေပြီလဲဆိုတာကို သိသွားတော့ သူများထက်နှာတစ်ဖျားသာတာပေါ့လေ။ အဲ့တော့ အတူဆက်ဖတ်လိုက်ရအောင်…
(၁) PONY (4.7+ M subscribers)
Pony Effect တံဆိပ်နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကို ယောင်းတို့ရင်းရင်းနှီးနှီးသိကြမှာပါနော်။ ကိုရီးယားရဲ့ မိတ်ကပ်ဂုရုဖြစ်တဲ့ Hye-Min Park @ Pony ကတော့ မိတ်ကပ်နယ်ပယ်ထဲမှာ ပါးပါးလေးနဲ့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယားဆန်ဆန်မိတ်ကပ်ကို ကမ္ဘာကျော်သွားအောင် ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့သူပါ။ ပြီးတော့ သူ(မ)က 2NE1 အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် CLရဲ့ ပင်တိုင်မိတ်ကပ်ပညာရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်ပညာရှင်ဖြစ်ပေမဲ့ သူ(မ)ရဲ့ Youtube ဘလော့ဗီဒီယိုတွေလုပ်တဲ့အခါ ဆရာစားမချန်ဘဲ မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့်ကို သေချာဖော်ပြပေးတတ်တာမို့ လူကြိုက်များတဲ့ အလှအပဘလော့ဂါတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ(မ)ရဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို PONY Syndrome Youtube Channel ထဲမှာ သွားလေ့လာလို့ရပါတယ်နော်။ နှင်းလည်း အမြည်းလေးတစ်ပုဒ် ထည့်ပေးထားပါတယ်လို့။
(၂) Bretman Rock (4.7+ M subscribers)
မိတ်ကပ်ကို မိန်းကလေးတွေပဲ လိမ်းတတ်တာ၊ နားလည်တာဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်းအယူအဆကြီးကို အဝေးလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတော့။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား Bretman Rock ဟာ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ မိတ်ကပ်ပုံစံတွေကို အသေးစိတ်ပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ တီထွင်မှုတွေနဲ့ လိမ်းခြယ်နိုင်သူပါ။ ပြီးတော့ သူက ဟာသဉာဏ်လည်း ရွှင်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ ရယ်လည်းရယ်၊ ပညာလည်းရတာမို့ ဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီမှာ ကြည့်ရှုနှုန်းက တအားမြင့်ပါတယ်။ သူကတော့ သိပ်မကြာသေးခင်အချိန်ကပဲ Morphe တံဆိပ်နဲ့ Highlighter အချပ်ကိုပူးပေါင်းပြီး ထုတ်ထားပါတယ်တဲ့။ သူ့ရဲ့ Youtube Channel ကတော့ Bretman Rock ပါ။ အမြည်းဗီဒီယိုလေးကိုလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်လို့။
(၃) PatrickStarrr (4.2+ M subscribers)
နှင်းအခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား Patrick Starr ကတော့ မိတ်ကပ်ဂုရုကြီးတစ်ယောက်ပါပဲ။ တကယ်ကို ပြောင်မြောက်လှတဲ့ သူ့ရဲ့မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်တွေ၊ မိတ်ကပ်မလိမ်းခင်နဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် လူအများရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်း မိတ်ကပ်ဘလော့ဂ်အပြင် တခြားနာမည်ကြီးမိတ်ကပ်တံဆိပ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ထုတ်ထားပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ Youtube Channel ကတော့ PatrickStarr ပါ။ အောက်မှာလည်း သူ့ရဲ့မိတ်ကပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကို အမြည်းလေး ထည့်ပေးထားပါတယ်နော်။
(၄) Jennifer Chiu (771K+ subscribers)
နှင်းကို မျှော့မျက်ခုံးဘဝကနေ ကယ်တင်ပေးလိုက်တာက သူ(မ)ပါပဲ။ သဘာဝဆန်ဆန် မိတ်ကပ်ပုံစံကို မိတ်ကပ်အကြောင်း ဘာမှမသိတဲ့ လူတွေတောင် ကောင်းကောင်းနားလည်သွားအောင် သင်ပြပေးနိုင်တဲ့သူပါ။ သူ(မ)ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းတွေကိုလည်း အမြဲဝေမျှပေးတတ်သူဖြစ်ပြီး တကယ်လည်းအသုံးဝင်တာမို့ မိတ်ကပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် နှင်းရဲ့ လက်ဦးဆရာလို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။ သူ(မ)ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေက အရမ်းမရှည်ဘဲ လိုရင်းတိုရှင်း လိုအပ်တာတွေကိုပဲ ပြောပြပေးထားတာမို့ ယောင်းတို့ကြည့်ရင်လည်း လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမှာပါ။ သူ(မ)ကတော့ ကိုရီးယား+အမေရိကန် အနွယ်ဖွားဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သူ(မ)ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Jennifer Chiu မှာသွားရောက်လေ့လာလို့ရပြီး ထုံးစံအတိုင်း နှင်းကလည်း အမြည်းလေးထည့်ပေးထားပါတယ်လို့။
Related Article >>> Blogger မမတွေလိုမျက်ဝန်းလှလှလေးရစေဖို့ မျက်တောင်တုတပ်နည်း
(၅) Chriselle Lim (762K+ subscribers)
ခေးမေမေတွေ လန်းလို့မရဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ? ဒီခေးမေမေကတော့ လန်းလွန်းလို့ ကိုယ်တွေတောင် လိုက်မမှီတော့ပါဘူးနော်။ သူ(မ)ကတော့ မိတ်ကပ်အပြင် ဖက်ရှင်၊ သူ(မ)ရဲ့ နေထိုင်တဲ့ပုံစံစသည်ဖြင့် အားလုံးကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေမျှပေးတာမို့ ခေးမေမေယောင်းတွေ မဖြစ်မနေလေ့လာသင့်တဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ပါ။ (ကလေးမွေးပြီး ဝိတ်ပြန်ချတာ ဘာညာစသည်ဖြင့်လည်း ဝေမျှထားသေးတယ်။) ပြီးတော့နောက်တစ်ခု နှင်းသဘောကျတာက သူ(မ)ရဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့အဆင့်နဲ့ ပုံစံကိုပြောပြတဲ့ ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင် အရမ်းပြည့်စုံလွန်းလို့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်ရုံနဲ့ ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သေချာပြောပြထားတာမို့ နှင်းကတော့ လုံးဝသဘောကျပါတယ်။ သူ(မ)ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Chriselle Lim မှာသွားကြည့်လိုရပြီး နှင်းကလည်း အမြည်းလေးထည့်ပေးထားပါတယ်။
အဆင်ပြေရင် လက်ခုပ်သံလေးကြားချင်ပါတယ်။ (အယ်လဲ့ :P) အကယ်၍ ယောင်းကအခုမှ မိတ်ကပ်စလိမ်းဖို့ လေ့လာနေတယ်ဆိုရင်တော့ နံပါတ် ၄ နဲ့ ၅ အရင်ကြည့်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ နည်းနည်းလယ်ဗယ်ကို မြှင့်ချင်ပြီဆိုရင်တော့ အပေါ် ၃ ယောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါလို့။
အိုခေ မှာ စိုပြေပြီး လှပနိုင်ကြပါစေ ယောင်းတို့ရေ…
References : wikinetworth, famousbirthdays
အားလုံးကတော့ သူ့ဟာနဲ့သူ ဆရာကွီးတှပေဲ
မီယနျမာဘလော့ဂါတှအေကွောငျး ဟိုးတဈလောတုနျးက ဖောကျသညျခပြွီးပွီဆိုတော့ အခုနောကျတဈဆငျ့တကျပွီး အာရှဘကျကို နညျးနညျးလေး ထပျလှမျးကွမယျလနေျော။ အာရှဘကျမှာ ဘယျလိုမိတျကပျပုံစံတှလေိမျးပွီး ဘယျလို Tutorial တှလေုပျလဲ၊ ဘယျလိုမိတျကပျရစေီးကွောငျးတှကေို ထပျလိုကျနပွေီလဲဆိုတာကို သိသှားတော့ သူမြားထကျနှာတဈဖြားသာတာပေါ့လေ။ အဲ့တော့ အတူဆကျဖတျလိုကျရအောငျ…
Pony Effect တံဆိပျနဲ့ ထုတျထားတဲ့မိတျကပျပစ်စညျးတှကေို ယောငျးတို့ရငျးရငျးနှီးနှီးသိကွမှာပါနျော။ ကိုရီးယားရဲ့ မိတျကပျဂုရုဖွဈတဲ့ Hye-Min Park @ Pony ကတော့ မိတျကပျနယျပယျထဲမှာ ပါးပါးလေးနဲ့ ပွောငျပွောငျတငျးတငျးဖွဈတဲ့ ကိုရီးယားဆနျဆနျမိတျကပျကို ကမ်ဘာကြျောသှားအောငျ ထိုးဖောကျနိုငျခဲ့သူပါ။ ပွီးတော့ သူ(မ)က 2NE1 အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ CLရဲ့ ပငျတိုငျမိတျကပျပညာရှငျလညျး ဖွဈပါတယျ။ မိတျကပျပညာရှငျဖွဈပမေဲ့ သူ(မ)ရဲ့ Youtube ဘလော့ဗီဒီယိုတှလေုပျတဲ့အခါ ဆရာစားမခနျြဘဲ မိတျကပျလိမျးနညျးအဆငျ့ဆငျ့ကို သခြောဖျောပွပေးတတျတာမို့ လူကွိုကျမြားတဲ့ အလှအပဘလော့ဂါတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူ(မ)ရဲ့ ဗီဒီယိုတှကေို PONY Syndrome Youtube Channel ထဲမှာ သှားလလေ့ာလို့ရပါတယျနျော။ နှငျးလညျး အမွညျးလေးတဈပုဒျ ထညျ့ပေးထားပါတယျလို့။
မိတျကပျကို မိနျးကလေးတှပေဲ လိမျးတတျတာ၊ နားလညျတာဆိုတဲ့ ရှေးဟောငျးအယူအဆကွီးကို အဝေးလှငျ့ပဈလိုကျပါတော့။ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံသား Bretman Rock ဟာ ပွောငျမွောကျလှတဲ့ မိတျကပျပုံစံတှကေို အသေးစိတျပွီး ဆနျးသဈတဲ့ တီထှငျမှုတှနေဲ့ လိမျးခွယျနိုငျသူပါ။ ပွီးတော့ သူက ဟာသဉာဏျလညျး ရှငျတာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတှကေို ကွညျ့တဲ့အခါ ရယျလညျးရယျ၊ ပညာလညျးရတာမို့ ဗီဒီယိုတဈခုခငျြးစီမှာ ကွညျ့ရှုနှုနျးက တအားမွငျ့ပါတယျ။ သူကတော့ သိပျမကွာသေးခငျအခြိနျကပဲ Morphe တံဆိပျနဲ့ Highlighter အခပျြကိုပူးပေါငျးပွီး ထုတျထားပါတယျတဲ့။ သူ့ရဲ့ Youtube Channel ကတော့ Bretman Rock ပါ။ အမွညျးဗီဒီယိုလေးကိုလညျး ထညျ့ပေးထားပါတယျလို့။
နှငျးအခုမိတျဆကျပေးမယျ့ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံသား Patrick Starr ကတော့ မိတျကပျဂုရုကွီးတဈယောကျပါပဲ။ တကယျကို ပွောငျမွောကျလှတဲ့ သူ့ရဲ့မိတျကပျအပွငျအဆငျတှေ၊ မိတျကပျမလိမျးခငျနဲ့ မိတျကပျလိမျးပွီး ပွောငျးလဲမှုတှကွေောငျ့ လူအမြားရဲ့ အာရုံစိုကျခွငျးကို ခံခဲ့ရသူလညျးဖွဈပါတယျ။ သူကလညျး မိတျကပျဘလော့ဂျအပွငျ တခွားနာမညျကွီးမိတျကပျတံဆိပျတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီး မိတျကပျပစ်စညျးတှကေိုလညျး ထုတျထားပါသေးတယျ။ သူ့ရဲ့ Youtube Channel ကတော့ Patrick Starr ပါ။ အောကျမှာလညျး သူ့ရဲ့မိတျကပျဗီဒီယိုတဈပုဒျကို အမွညျးလေး ထညျ့ပေးထားပါတယျနျော။
နှငျးကို မြှော့မကျြခုံးဘဝကနေ ကယျတငျပေးလိုကျတာက သူ(မ)ပါပဲ။ သဘာဝဆနျဆနျ မိတျကပျပုံစံကို မိတျကပျအကွောငျး ဘာမှမသိတဲ့ လူတှတေောငျ ကောငျးကောငျးနားလညျသှားအောငျ သငျပွပေးနိုငျတဲ့သူပါ။ သူ(မ)ရဲ့ ကိုယျပိုငျနညျးလမျးတှကေိုလညျး အမွဲဝမြှေပေးတတျသူဖွဈပွီး တကယျလညျးအသုံးဝငျတာမို့ မိတျကပျနဲ့ပတျသကျလာရငျ နှငျးရဲ့ လကျဦးဆရာလို့ပွောရငျလညျး မမှားပါဘူးနျော။ သူ(မ)ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေ အရမျးမရှညျဘဲ လိုရငျးတိုရှငျး လိုအပျတာတှကေိုပဲ ပွောပွပေးထားတာမို့ ယောငျးတို့ကွညျ့ရငျလညျး လှယျကူအဆငျပွစေမှောပါ။ သူ(မ)ကတော့ ကိုရီးယား+အမရေိကနျ အနှယျဖှားဖွဈပါတယျတဲ့။ သူ(မ)ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေို လလေ့ာခငျြတယျဆိုရငျတော့ Jennifer Chiu မှာသှားရောကျလလေ့ာလို့ရပွီး ထုံးစံအတိုငျး နှငျးကလညျး အမွညျးလေးထညျ့ပေးထားပါတယျလို့။
Related Article >>> Blogger မမတှလေိုမကျြဝနျးလှလှလေးရစဖေို့ မကျြတောငျတုတပျနညျး
ခေးမမေတှေေ လနျးလို့မရဘူးလို့ ဘယျသူပွောလဲ? ဒီခေးမမေကေတော့ လနျးလှနျးလို့ ကိုယျတှတေောငျ လိုကျမမှီတော့ပါဘူးနျော။ သူ(မ)ကတော့ မိတျကပျအပွငျ ဖကျရှငျ၊ သူ(မ)ရဲ့ နထေိုငျတဲ့ပုံစံစသညျဖွငျ့ အားလုံးကိုလညျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဝမြှေပေးတာမို့ ခေးမမေယေောငျးတှေ မဖွဈမနလေလေ့ာသငျ့တဲ့ ဘလော့ဂါတဈယောကျပါ။ (ကလေးမှေးပွီး ဝိတျပွနျခတြာ ဘာညာစသညျဖွငျ့လညျး ဝမြှေထားသေးတယျ။) ပွီးတော့နောကျတဈခု နှငျးသဘောကတြာက သူ(မ)ရဲ့ အသားအရထေိနျးသိမျးတဲ့အဆငျ့နဲ့ ပုံစံကိုပွောပွတဲ့ ဗီဒီယိုတှမှောဆိုရငျ အရမျးပွညျ့စုံလှနျးလို့ ဗီဒီယိုတဈခုကွညျ့ရုံနဲ့ ဘာတှလေိုအပျတယျဆိုတာကို သခြောပွောပွထားတာမို့ နှငျးကတော့ လုံးဝသဘောကပြါတယျ။ သူ(မ)ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေို ကွညျ့ခငျြတယျဆိုရငျတော့ Chriselle Limမှာ သှားကွညျ့လိုရပွီး နှငျးကလညျး အမွညျးလေးထညျ့ပေးထားပါတယျ။
အဆငျပွရေငျ လကျခုပျသံလေးကွားခငျြပါတယျ။ (အယျလဲ့ :P) အကယျ၍ ယောငျးကအခုမှ မိတျကပျစလိမျးဖို့ လလေ့ာနတေယျဆိုရငျတော့ နံပါတျ ၄ နဲ့ ၅ အရငျကွညျ့ရငျ ပိုအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ နညျးနညျးလယျဗယျကို မွှငျ့ခငျြပွီဆိုရငျတော့ အပျေါ ၃ ယောကျကိုကွညျ့လိုကျပါလို့။
အိုခေ မှာ စိုပွပွေီး လှပနိုငျကွပါစေ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: asian, Beauty, bloggers, Famous, stars, youtube